Kitra – «Mada 2019»: mitohy ny fandresen’ny Fosa Jr Boeny | NewsMada
Kitra – «Mada 2019»: mitohy ny fandresen’ny Fosa Jr Boeny
Nitohy, omaly nanerana ireo kianja efatra, eto amin’ny Nosy, ny andro fahatelo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara: ny tany amin’ny kianja Rabemananjara Boeny, ny tao amin’ny kianja Me Kira Andaboly Toliara, ny tao amin’ny kianja monisipalin’i Toamasina ary ny tao amin’ny kianja Ampasambazaha Fianarantsoa.
Tany Mahajanga, nitohy ny fahombiazan’ny Fosa Jr, rehefa nanilika ny Tam Port-Bergé, tamin’ny isa, 2 no ho 1. Niady ny fihaonana teo amin’ny roa tonta satria nanohitra hatramin’ny farany ny Tam. Porofon’izany, nanokatra ny isa voalohany ry zareo, tamin’ny alalan’ny baolina tafiditr’i Patrice, teo amin’ny minitra faha-3, nanombohan’ny fihaonana. Efa tany amin’ny minitra faha-29 kosa vao nahasahala ny isa i Hery.
Nifamaliana avy eo ny fanafihana, saingy nanantombo teo amin’ny fahazarana milalao amin’ny kianja “synthètique” ny Fosa ka namono ny baolina faharoa ho azy ireo i Baggio. Ny Ajesaia kosa, nanamontsana ny JSA Antalaha, tamin’ny isa mavesatra, 15 no ho 0 ka tafiditr’i Rojo avokoa ny baolina enina tamin’izany. Mitarika aloha izany, hatreto, ny Fosa Jr, arahin’ny Tam sy ny Ajesaia, samy manana isa 4 avy.
Tany Toliara, resin’ny Cosfa, tamin’ny isa 4 no ho 0, ny VFM ary ny AS Jofama kosa, nanilika ny Fitafa, tamin’ny isa 2 no ho 0, tany Fianarantsoa.